कति पुग्यो डलरको मूल्य ? - ArthikBazar.com
Home अन्तर्राष्ट्रिय कति पुग्यो डलरको मूल्य ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिद दर अधिकतम १२१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्री दर १२२ रुपैयाँ १२ पैसा कायम गरेको छ । युरोपियन यूरो एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्री दर १३२ रुपैयाँ ७४ पैसा छ । यूके पाउन्ड स्टलिङ एकको खरिद दर १५८ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्री दर १५८ रुपैयाँ ८४ पैसा छ । स्वीस फ्रेङ्क एकको खरिद दर १३० रुपैयाँ २३ पैसा मात्र र बिक्री दर १३० रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ९० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर ९० रुपैयाँ ७८ पैसा छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिद दर ९६ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ भने बिक्री दर ९६ रुपैयाँ ४८ पैसा छ । जापानी येन १० को खरिद दर नेपाली ९ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ७२ पैसा छ भने चिनियाँ यूआन एकको खरिद दर १९ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
साउदी अरबियन रियाल एकको खरिर दर ३२ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर ३२ रुपैयाँ ५६ पैसा छ भने कतारी रियाल एकको खरिद दर ३३ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर ३३ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८ रुपैयाँ ७१ पैसा छ भने बिक्री दर २८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ भने कोरियन वन १०० को खरिद दर नौ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्री दर नौ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम भएको छ ।
Previous articleहेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकमा पाण्डे
Next articleआईफोन निर्माताले चीनमा उत्पादन बन्द गर्‍यो